လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသားတွေကို ထိုင်းတောနက်ထဲမှ ကယ်တင်
အိပ်ငိုက်နေသူအား ထင်းချောင်းဖြင့်ရိုက်ရာမှ သေဆုံး
ခိုတောင်ကျွန်းလူသတ်မှုအရေး ဗြိတိန်ကူညီဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လက်ခံလိုက်ပြီ
မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဓားထိုးခံရမှု ၂၄နာရီ အတွင်း ဖမ်းဆီး ဖော်ထုတ်နိုင်
ISတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဘာနီမြို့မှပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီဟုကာ့ဒ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆိုဗြိတိန်ဓားစာခံတစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်ကို IS အဖွဲ့ထုတ်လွှင့်
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၃၂)
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်မှုဖြစ်
၂ဝ၁၅ မဲရုံတွေမှာ တရားဝင်စောင့်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများတောင်း ဆိုမည်
တောင်ကြီးတွင် မြေထိန်းနံရံပိ အိမ်ပြို လူ ၅ ဦး သေဆုံး
ဘန်းချောင်း ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းကိစ္စ ဒေသခံတွေမကျေနပ်
အရက်ဖြတ်ထားသူ အမျိုးသားတစ်ဦး စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ကာ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
ပုဏ္ဏားကျွန်းနယ်တွင် စက်လှေနှစ်စီးတိုက်ရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
ရော့ခ်အဆိုတော် ဘိုနိုက သူ့မျက်မှန်၏ လျှို့ဝှက်ချက် ဖွင့်ဟ
ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုသူများကို နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်လူစုခွဲ
လူ ၃၉ ဦးကို သွေးအေးအေးဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဆေးရုံစောင့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ
အချိန်တန်ပြီ – ရွှေကူမေနှင်း
ဆီးခါးရည် - ဇော်ကိုကိုလတ်ဘုရင်
ခိုတောင်းကျွန်းလူသတ်မှု ဗြိတိန်ပါဝင်စစ်ဆေးဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သဘောတူ၊ လန်ဒန်မှာဆန္ဒပြ
စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံ ရခိုင်လူငယ်နှစ်ဦးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ထိုင်းသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
ထိုင်းတောင်ပိုင်း က ကျွန် အရောင်းအဝယ်
ဗြိတိသျှရဲများကို လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် ထိုင်းခွင့်ပြုပြီ
ကော့တောင်ကျွန်း လူသတ်မှု ဗြိတိန် အစိုးရ စုံစမ်းဖို့ တောင်းဆို
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တဲ့ကိစ္စတွေ အရေးယူဖြေရှင်းဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်း
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဟာ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး အဲဒီသူတွေနဲ့ အတူ လှေနဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ တခြားသူ ၁၇၆ ဦးကတော့ ပျောက်နေတယ်လို့ Bd New 24 com မှာ (176 Bangladeshis ‘sold’ as slave in Thailand?) ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ငါးဖမ်းဘုတ်တွေနဲ့စက်ရုံတွေမှာ အလုပ် လုပ်ကြဖို့
Posted: 18 Oct 2014 04:55 AM PDT
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ဒေးဒလူကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျင်ကြီးဒေါင့်ကျေးရွာနေ ဖောင်ဦးစီး ဇော်ထက်(၂၃)နှစ်၊ ရေလုပ်သားများဖြစ်ကြသော မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ပိကျေးရွာနေ စိုးလေး(ခ)စိုးလွင်ကျော် (၂၉)နှစ်၊ တစ်ရပ်တည်းနေ ကျော်ဦး(၄၅)နှစ်နှင့် မအူပင်မြို့နယ်၊ ကျုံစုပ်ကျေးရွာနေ ကျော်ဇေယျ(ခ) လရောင်(၂၅)နှ
Posted: 18 Oct 2014 04:54 AM PDT
ထိုင်းနုိုင်ငံ ခိုတောင်အပန်းဖြေကျွန်းမှာ အသတ်ခံရတဲ့ ဗြိတိန်နုိုင်ငံသား ၂ ဦးအမှုကို ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ကူညီစစ်ဆေးဖို့ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယုက လက်ခံလုိုက်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းမှာ ဒီနေ့ ဖေါ်ပြပါတယ်။ အဲဒီသေဆုံးမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး မြန်မာနုိုင်ငံသား ကိုဇော်လင်း နဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းတို့ကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယုဟာ ဥရောပ နဲ့
Posted: 18 Oct 2014 04:53 AM PDT
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မကွေး ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဓားထိုးခံရမှု ၂၄နာရီ အတွင်း ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်နိုင် မကွေး အောက်တိုဘာ ၁၇ မကွေးတက္ကသိုလ် အဝေးသင် ဌာန ဌာနခွဲစာရေး ဦးမျိုးဝင်းထွန်း က ယခုလ ၁၅ ရက် ည ၁၁နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် မကွေးမြို့ ပြည်တော် သာရပ်ကွက်ရှိ'ယူရို'ထမင်းဆိုင်ရှေ့ ၌ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားကြောင်း ဖုန်း နှင့်သတင်းပေးချက်အရမကွေးမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ဝင်းကျော်ဦးနှင့် အဖွဲ့
Posted: 18 Oct 2014 04:41 AM PDT
ကိုဘာနီ အောက်တိုဘာ ၁၇ ဆီးရီးယား-တူရကီနယ်စပ် ရှိ စစ်ရေးအရ အရေးပါသော ကိုဘာနီ မြို့၏ နေရာ အများစုကို သိမ်းပိုက် ထားသည့် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် IS အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ညပိုင်း တွင် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ သွားခဲ့ပြီဟု ကာ့ဒ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက အတည်ပြုကြောင်း ဘီဘီစီသတင်း ဌာနက ယနေ့ဖော်ပြထားသည်။ IS အဖွဲ့သည် ကိုဘာနီမြို့ရှိ ဧရိယာအားလုံးမှ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့အရှေ့ပိုင်းတွင် စခန်းချ ထားကြောင်း ကာ့ဒ်လက်
Posted: 18 Oct 2014 04:16 AM PDT
နော်ဝေးစကား သင်ဖို့လိုအပ်ပါသလား သက်တန်းကုန်သွားတဲ့ မြန်မာစာအုပ်အတုတွေကိုပြန်အပ်၊ ဒီနိုင်ငံကထုတ်ပေးတဲ့ နော်ဝေးမှာနေထိုင် ခွင့် ယာယီစာအုပ်တွေကိုင်ပြီဆိုတော့ လိုလိုမယ်မယ် နော်ဝေးစာ သင်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ကူး ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ကူးပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနိုင်ငံကို ရောက် ပြီး ၅ နှစ်ကြာမှ စိတ်ကူးပေါ်လာတဲ့သဘောပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ နော်ဝေးစကား မတတ်ပဲေ
Posted: 18 Oct 2014 03:43 AM PDT
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ၁၈.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၇၄၀ အချိန်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ သာဓုအနောက် ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၁)သစ်စက်ရှေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်(၁)စီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အခင်းဖြစ် မီးလောင်ရာသို့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မီးသတ်ယာဉ်များရောက်ရှိ ငြှိမ်းသတ်ခဲ့သဖြင့် ၀၇၅၅ အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ 8E---- ဆူဇူကီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် အဆိုပါ
Posted: 18 Oct 2014 03:42 AM PDT
အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ အခုလ ၂ဝ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ မဲရုံတွေကို တရားဝင် စောင့်ကြည့်ခွင့် ရရေး အတွက် တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတင်ပြမယ့် အချက်တွေကို မိမိတို့အရပ် ဖက်အဖွဲ့အစည်းအချို့ ဒီကနေ့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ် လို့ မေတ္တာကန်ပိန်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူ ကိုညီကျော်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ "အခုလည်း ကျနော်တို့အဲ့ဒီအတွက် အလုပ် ရုံဆွေးနွေး ပွဲ
တောင်ကြီးမြို့မှာ မနေ့ညက မိုးသည်းသည်း ထန်ထန်ရွာပြီး မြေထိန်းနံရံ နဲ့ အိမ်ပြိုကျလို့ လူ ၅ ဦး သေဆုံး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့ အရှေ့ပင်စင်ရပ် (ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ ခွာညိုလမ်း) မှာ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်က တောင်ကမ်းပါးယံမှာ ကာရံထားတဲ့ အုတ်တံတိုင်း အိမ်ပေါ်ကို ပြိုကျပြီး လူ ၅ ဦး နေရာမှာတင် သေဆုံးခဲ့သလို ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦးကို ဒဏ်ရာရပြီး တောင်ကြီးဆေးရုံကို
Posted: 18 Oct 2014 03:40 AM PDT
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့နယ် ဘန်းချောင်း ကျောက်မီး သွေးတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံပိုင် East Star ကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်း သားတွေအကြား အခြေအတင် ဖြစ်နေပြီး စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ KNU နဲ့ အစိုးရတပ်တွေက ဒေသခံတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ ထားဝယ်အခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေက အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် မနေ့က ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဘန်းချောင်းကျောက်မီးသွေးစီမံကိန်းက စွန့်ပစ်လိုက် တဲ့ြေ
Posted: 18 Oct 2014 03:34 AM PDT
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ၁၇.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၄၃၀ အချိန်တွင် လှိုင်သာယာမြို့မ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ကိုသန့်ဇင်ဦး၊ (၃၃)နှစ်ဖြစ်ပြီး နေအိမ်အလယ်ခန်းရှိ ထုတ်တန်းတွင် အ၀တ်နှင့်ဝါယာတို့ ပူးလိန်ထားသော ကြိုးဖြင့် ကြိုးဆွဲချသေဆုံး နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ေ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်တပ်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) တို့အကြား စစ်ရေးတင်းမာမှု ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အစိုးရနဲ့ ကေအိုအေကြား ညှိနှိုင်းရာမှာ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၆ ကို နေရာကနေ ဆုတ်ခွာပေးဖို့သာ အစိုးရက ပြောဆိုနေတယ်လို့ ကေအိုင်အေ ဒုတိယ စစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်က ပြောပါတယ်။ ဒီတင်းမာမှုပေါ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ကို နော်နိုရင်းက
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် စက်လှေနှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံး သွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည့် အဆိုပါစက်လှေနှစ်စီး တိုက်မှုမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ညနေ ၇ နာရီခန့်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ စင်းဘောကိုင်း ကျေးရွာအနီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်လှကျေးရွာနေ မောင်သိန်းညွန့် (
Posted: 18 Oct 2014 03:27 AM PDT
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကို ကြိုဆို ထောက်ခံသော လူတစ်ထောင် ကျော်ပါဝင်သည့် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှုတစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အေးရွာအနောက်ရပ်ကွက်၊ ၀ါးရုံဆိပ်ကျေးရွာအတွင်း ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံးက ခွင့်ပြုပေးသော ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဦးတင်စိန်ဆိုသူက ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ
ယူတူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရော့ခ်အဆိုတော် ဘိုနိုက သူရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ နေကာမျက်မှန်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟလာပါတယ်။ အိုင်ယာလန် ရော့ခ် အဆိုတော်က နေကာ မျက်မှန် ၀တ်ထားတဲ့ အချိန်များတာကြောင့် သူ့မျက်လုံးတွေဟာ အလင်းရောင်ကို ခံနိုင်ရည်စွမ်း နည်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ လုံး မျက်လုံးမှာ ရေတိမ်စွဲခဲ့ပြီး ကုသခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ဗြိတိန် တီဗွီ အစိအစဉ် ဂေ၇ဟမ် နော်တန် တွေ့ဆုံခန်းမှာြေ
Posted: 18 Oct 2014 03:26 AM PDT
ဟောင်ကောင် အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး ရဲတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေကို ဒီနေ့ မနက်စောစောပိုင်းက ငရုတ်ကောင်းရည်တွေနဲ့ ပက်၊ နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ပြီး လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ မောင်းကွခ်မြို့နယ်ထဲက နသန်လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေကို ရဲတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ရိုက်နှက်ခဲ့တာပါ။ ရောင်စုံထီးတွေ၊ မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ အကာအကွယ်ယူထားပြီး ထိုင်နေတဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေက ရဲတွေကို
Posted: 17 Oct 2014 10:05 PM PDT
Alleged serial killer Tiago Gomes da Rocha is suspected of killing 39 people. Objects found at the house of suspected serial killer Thiago Gomes da Rocha 16 Oct 2014 ဘရာဇီးလီးယား ၊ ၁၈-၁၀-၂၀၁၄ ဘရာဇီး ရဲတပ်ဖွဲ့သည် လူ ၃၉ ဦးကို သွေးအေးအေးဖြင့် သတ်ဖြတ် ခဲ့သည့် ဆေးရုံစောင့် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းဌာန များက အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
Posted: 17 Oct 2014 10:00 PM PDT
၈၈ အပြီးတွင် စစ်တပ်အင်အားကို အကြီးအကျယ်တိုးချဲ့သည်။ ထိုအင်အား အတွက် မြေသိမ်းသည်။ ပြည်လမ်း မကြီးတစ်လျှောက် မင်္ဂလာဒုံမှ ထောက်ကြံ့ လမ်းဆုံအထိကို အုတ်တံတိုင်းခတ်လိုက်ရုံနှင့် “တပ်မြေ”ဟု သစ်သား ဆိုင်းဘုတ်လေး စိုက်ထူရုံနှင့် ပြီးသွားပြီ . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားက ဟောခဲ့သည်။ ““ဟေတုပစ္စယော””ဟူသော ပါဠိ စကားဖြစ် ၏။ ထိုသဘောကိုပင်
ဆီးသီးသည်လာရင် မှောက်ကျတာကို စောင့်မနေတော့ဘဲ ဆီးသီးသည် လဲကျသွားအောင် ခြေထိုးခံ တတ်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်လာ ပါပြီ။ မှောက် ကျလာတဲ့ဆီးသီးတွေကို အတင်းလုပြီးကောက်စားကြ၊ အိတ်ထဲ ကောက် ထည့်ပြီး ၀ှက်ထားကြနဲ့ “ခွေးဘုရားပွဲတိုး”သလိုပါပဲ . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အမှန်တော့ ကျုပ်တို့ရွာသာယာက လူတွေဟာ သူများဆီးသီးဗန်းမှောက်ကျ တဲ့အခါမှာ အတင်းဝင် လုပြီး ကောက်စား တတ်တဲ့ လူတွေနေတဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ခိုတောင်း (ခေါ်) လိပ်ကျွန်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရတဲ့အမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဝင်ရောက်ကူညီစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ ဥရောပအာရှ ASEM အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချားက အခုလို
Posted: 17 Oct 2014 08:59 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ခိုထောင်ကျွန်း(ခေါ်)လိပ်ကျွန်းတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ခရီးသည် နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးခံထားရသောာရခိုင်လူငယ် (၂) ဦးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံးရှေ့တွင် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ဒေးဗစ်မီလာ(၂၄နှစ်) နှင့် ဟန်နာဝှစ်သာရစ် (၂၃ နှစ်) ကို မုဒိမ်းကျင့်
Posted: 17 Oct 2014 08:42 PM PDT
ဘင်္ဂ္လားဒေရှ့် လူမျိုးတွေ ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာ ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစား ကုန်ကူး နေကြတဲ့ အထောက် အထားတွေ ကို ဘီဘီစီ တွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။ ဘီဘီစီ အရှေ့တောင်အာရှ သတင်းထောက်ဟာ ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် လူမျိုး ၁၃၀ ကျော်ကို ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဖန်းငခရိုင်အတွင်း ကမ်းရိုးတန်းတောအုပ် တခုထဲမှာ လှောင်ပိတ် ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ နေရာတခု ကို အရောက် သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထဲက လွတ်မြောက်လာသူ အယောက် ၄၀ နဲ့ ၅၀ြ
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းက ဗြိတိသျှလူမျိူး ၂ ဦး အသတ်ခံရတဲ့အမှုကို ဗြိတိသျှရဲတွေ သွားရောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကမ်မရွန်းက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ဗြိတိန်က ရဲအရာရှိတွေ အခင်းဖြစ်ရာကို သွားရောက်စစ်ဆေးဖို့ ပြောကြားတဲ့အခါမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဗြိတိန်ရဲ့ အကူအညီကို ယူဖို့ လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ထိုင်းရဲကြ
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကော့တောင်ကျွန်း လူသတ်မှုကို သီးခြား စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးဖို့ ဗြိတိသျှ အစိုးရကို ဗြိတိန်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းက တောင်းဆိုထားတဲ့ လက်မှတ် တသိန်းကို နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ မြန်မာတွေ ဦးဆောင်ပြီး ဒီကနေ့မှာ နံပတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးကို သွားရောက် ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကော့တောင်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းရဲတွေရဲ့ စုံစမ်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေး အခြေနေတွေကို အများကြီး ပြောင်းလဲသွားတာကို အသိမှတ်ပြု ချီးကျူးရမှာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေတဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတွေကို မဖြေရှင်းခဲ့ရင် ရပြီးသားရလာဒ်တွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်က ပြေကြားလိုက်ပါတယ်။ မနေ့က ကုလသမဂ္ဂက ကြိုတင်ဖြန့်ဝေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး
Posted by lu bo at 9:13 AM